Sabotsy 12 Jona 2021 – FJKM
1 SAMOELA 15.16-26
Sarobidy ny mihaino an’Andriamanitra
Anisan’ny teny manan-danja indrindra ao amin’ny tontolon’ny Testamenta Taloha . ny hoe: « mihainoa ry Israely« . Izany teny izany dia fitaomana ny mpitondra sy ny vahoaka Israely hihaino mandrakariva an’Andriamanitra . Tena loharanom-piadanana sy loharanom-pitahiana ho an’ny vahoaka Israely mantsy izany . Ny fihainoana an’Andriamanitra dia :
1-Ahafahana mandresy ny fahavalo
Afaka nandresy sy nandringana ny Amalekita i Saoly mpanjaka sy ny vahoaka Israely noho izy ireo nanaraka ny Tenin’Andriamanitra sy ny tenin’i Samoela mpanompon’Andriamanitra . Rehefa mifanaraka amin’izay toro-làlana omen’Andriamanitra sy ny mpanompon’Andriamanitra ny zavatra ataon’ny mpitondra sy ny vahoaka dia mahita fahombiazana izy ireo . Ampifanaraho amin’ny toromariky ny Tenin’Andriamanitra mandrakariva ny zavatra rehetra tanterahina fa fomba ho enti-mandresy ny fahavalo izany .
2-Ahazoana sitraka amin’Andriamanitra ( and22 )
Tsy naringan’i Saoly sy ny Israely ny biby fiompy araka ny toromariky ny Tompo . Nokasain’izy ireo hatao fanatitra ho an’ Andriamanitra izany. Nieritreritra hahazo sitraka tamin’Andriamanitra izy ireo raha nanao izany , kanjo teny mafy no azony tamin’Andriamanitra noho izy ireo tsy nanaraka ny Tenin’Andriamanitra . Tsy nahazo sitraka araka izay nantenainy . Raha te-hahazo sitraka amin’Andriamanitra dia zava-dehibe ny fahaiza-mihaino sy mankato Azy . Sitraky ny Tompo mihoatra noho izay fanomezana atolotra Azy ny mihaino sy mankato Azy .
Nahoana ny vahoakan’Andriamanitra izay mihaino an’Andriamanitra no tsy tonga amin’ny fankatoavana Azy ?